Internet Khabar Desk, Author at Internet Khabar - Page 231 of 254
September 6, 2017 August 6, 2018 Internet Khabar Desk
विश्वमा एचआईभी संक्रमितको संख्या तिब्र रुपमा बढ्दो छ । तर एचआईभी सम्बन्धी औषधी छैन । परिणामतः वर्षेनी लाखौ मानिसहरुले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् । नयाँ विधी विकास यसकै प्रभावकारी उपचारको खोजमा लागेका अमेरिकाका वैज्ञानिकको समूहले
September 6, 2017 August 6, 2018
नेपाल आइडल रोक्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश
September 6, 2017 Internet Khabar Desk
काठमाडौं । काठमाडौं अदालतले नेपाल आइडल नामक रियालीटी सो रोक्नका लागि अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश दिवाकर भट्टको एकल इजलासले यस्तो दिएको हो। अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानले नेपाल आइडलले करार ऐनको दफा ८७ उल्लंघन गरेको
अस्पताल पुगेका विरामीको रिर्पोट हेर्दा चिकित्सक चकित !
एजेन्सी । चीनमा अस्पताल आएका एक विरामीको जाँच गर्दा चिकित्सक चकित बनेका छन्। चीनको गुआंगजो क्षेत्रका डाक्टरले ३३ वर्षीय एक पुरुषको ‘बट’ (ढाडदेखि तलको भाग) बाट एउटा सिसाको कप बाहिर निकालेका छन्। विरामीको नाम गोप्य
September 6, 2017 October 19, 2018 Internet Khabar Desk
मधुमेह यस्तो रोग हो, जो लागेपछि कहिल्यै निको हुँदैन । तर, यसलाई कम भने गर्न सकिन्छ । कसरी ? हाम्रै जीवनशैलीलाई अलिकति फरक तरिकाले जिउन सके हुन्छ । केही महत्वपूर्ण टिप्स पढ्नुस्, जसले मधुमहेलाई कम
September 6, 2017 October 19, 2018
September 6, 2017 July 28, 2018 Internet Khabar Desk
अनिद्राको समस्या भएका मानिसले नराम्रा सपना देख्छन् । यस्तो अवस्थामा केही क्षणका लागि श्वासप्रश्वासमा पनि समस्या आउन सक्छ । नियमित नराम्रा सपना देख्नु मुटुको समस्यासँग पनि गाँसिएको हुन्छ । केही समयअघि अनुसन्धानकर्ताले बाल्यकालमा नियमित नराम्रा
September 6, 2017 July 28, 2018
रुसमा आउँदो वर्ष हुने विश्वकप फुटबलको छनौट अन्तर्गत बुधबार बिहान भएको खेलमा ब्राजिल बराबरीमा रोकिएको छ । दक्षिण अमेरिकी क्षेत्रको छनौट अन्तर्गतको खेलमा रुस विश्वकपका लागि छनौट भइसकेको ब्राजिल कोलम्बियासँग १–१ को बराबरीमा रोकिएको हो।
आजको राशिफल – मिति २०७४ साल भदौ २१ गते पूर्णिमा तिथि बुधबार
मेष – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ (Aries) आँटेको काममा अरूको मुख ताक्नाले पछि परिनेछ। श्रमको उचित मूल्यांकन भए पनि प्रतिफल हातपार्न केही समय लाग्नेछ। आफ्नो प्रतिफल अरूलाई सुम्पनुपर्ने परिस्थिति आउन
आजदेखि सोह्र श्राद्ध शुरु, पितृपक्षमा गर्न नहुने कुरा यी हुन्
September 6, 2017 September 6, 2017 Internet Khabar Desk
काठमाडौँ । आश्विन कृष्ण प्रतिपदादेखि आश्विन शुक्ल प्रतिपदासम्मका १६ दिनसम्म गरिने सोह्रश्राद्ध आजदेखि सुरु भएको छ। प्रतिपदादेखि १६ तिथिमध्ये जुन तिथिमा आफ्ना पिताको निधन भएको हो, सोही दिन सोह्रश्राद्ध गर्ने गरिन्छ। आश्विन कृष्ण पक्षलाई पर्व
नेपाल आइडलमा यो हप्ता भोट गर्दा पैसा नलाग्ने
काठमाडौँ । नेपालको चर्चित रियालिटी ‘शो’ नेपाल आइडलमा यो हप्ता भोट गर्दा पैसा नलाग्ने भएको छ। गत हप्ताको नो एलिमिनेसन एपिसोडपछि सामाजिक सञ्जालमा देखिएका दर्शकका गुनासा सम्बोधन गर्न आयोजकले आइडलको एपमार्फत निशुल्क भोटिङको व्यवस्था गरेको
September 5, 2017 September 5, 2017 Internet Khabar Desk
काठमाडौं : भोलि बुधवारदेखि पितृपक्ष शुरु हुन्छ। यसबेलामा केही काम अवश्य गर्नुपर्छ र केही काम पटक्कै गर्नु हुँदैन । यी कुरामा ध्यान दिनुस्। श्राद्ध आफ्नै घरमा गर्नुपर्छ, अर्काको घरमा गर्न निषेध छ। श्राद्धमा तीन वस्तु
← Prev 1 … 230 231 232 … 254 Next →